Tanjona ny hanamafisana ny fahaiza-manao eo amin’ny asa fanaovan-gazety mba ho tena matihanina, indrindra manoloana izao fiatrehana ny fifidianana izao. Tokony hanamafy sy hahatsara hatrany ny demokrasia ny asa fanaovan-gazety, hoy ny solontenan’ny PNUD. Etsy an-daniny, nanambara ny teo anivon’ny CENI fa vaindohan-draharaha ny fitoniana amin’izao ka tokony ho vaovao marim-pototra no omena ny vahoaka mba tsy hiteraka fikorontanana eto amin’ny firenena. Manoloana ny fitakiana ataon’ireo kandida mivondrona dia nanambara ny filohan’ny CENI, Hery Rakotomanana fa raha ny lalàna manankery dia tsy afaka mikitika ny lisi-pifidianana intsony satria nilaza mazava izany fa mihidy amin’ny 15 mey ny lisitra ary misokatra indray ny voalohan’ny volana desambra. Ary raha hosokafana indray aza izany dia midika fa hihemotra ny fifidianana satria tsy ampy intsony, hoy izy ny fotoana hikirakirana ara-teknika ny lisitra. Efa niantso sy namerina foana ny fe-potoana farany ny CENI ka tsy andraikitray intsony ho an’ireo izay tsy nanaraka ny fepetra. Na izany aza dia hanomana fifampiresahana amin’ny kandida rehetra ny CENI, hoy ny filohany. Ankoatra izay dia nanamafy izy fa tsy tokony horaisina honohonon-dresaka izay tsy fanarahan-dalàna rehetra tsikaritra any fa mila entina mazava eo anivon’ny CENI ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy fepetra haingana. Nanizingizina ihany koa izy fa ny CENI dia tsy manao hosoka ary tsy misy hosoka izany ao fa tokony hoentina manatona azy ireo ny porofo ho amin’ireo manana ahiahy amin’izany.